Fampiharana tena ilaina 4 ho an'ireo tia vorona | Androidsis
Amin'ity lahatsoratry ny horonantsary vaovao ity, zavatra hafa tsy marin-toetra, te-hitondra anao aho fampiharana efatra izay tena ilaina ho an'ireo tia vorona na mpankafy ornithology amin'ny ankapobeny.
Fampiharana 4 izay samy hafa be amin'ny tsirairay ary, araka ny nolazaiko taminareo, dia ho lasa tsy azo sarahina amin'ireo rehetra ireo tia vorona na mpankafy ornithologists amateur izay te-hitsangatsangana any ambanivohitra na any an-tendrombohitra amin'ny fikarohana vorona vaovao handinihana, hihainoana ary hianarana momba ireo karazana rehetra izay manadio amin'ny toerana samihafa ao amin'ny Espana lehibe misy antsika.
1 Birds of Spain
2 Fanamarinana vorona
3 Hira vorona
4 Feo vorona 75
Birds of Spain dia fampiharana tohana na noforonina miaraka amin'ny Fototra BBVA que es ny mpitari-dalana tena ilaina ho an'ny tia vorona tsara rehetra izay mirehareha amin'ny maha-izy azy.
Rakipahalalana iray manontolo izay hahitanao azy fampahalalana mifandraika sy eo noho eo momba ny zava-drehetra mitranga amin'ny tontolon'ny ornithology amin'ny faritany espaniola, izay ankoatry ny torolàlana vorona feno dia ho hitanao ihany koa ny fampahalalana tena sarobidy sy mahaliana momba ny làlan-kaleha ornithological eto amin'ny firenentsika.
Developer: SEO / BirdLife
Fanamarinana vorona Ity dia iray amin'ireo fampiharana tena tsara na tena ilaina izay tsy tokony hanjavona amin'ny Android an'ny olona rehetra izay mirehareha amin'ny maha-mahay ornithologist azy, ary izany dia, raha te hivoaka any ambanivohitra, ny tanàna na eny an-tendrombohitra mihitsy aza ianao hitady mahita vorona vaovao azo alaina amin'ny solomaso fakantsarinao, Ity rindranasa manaitra ho an'ny Android ity dia manolotra anao hahatratra fanamby maro hanatsarana raha manokana ny tenanao amin'ny fialambolinao lehibe mpiambina vorona ianao.
Tsidiho ary mahazoa fanamby vaovao rehefa mahafantatra toerana vaovao any Espana, Portugal ary ireo nosy ianao, manomboka amin'ny fanamby tsotra hivoatra miandalana sy ho sahy amin'ireo fanamby sarotra indrindra izay tsy ho an'ny mpampiasa manam-pahaizana amin'ity science of ornithology ity ihany.
Raha tianao izany mianara mahafantatra ny vorona henonao any lavitra eny amin'ny alàlan'ny fomba fihirany fotsiny, fampiharana iray izay hanampy anao hahatratra an'io dia Birdsong.
Fampiharana iray tsotra kokoa noho ireo roa hafa natolotro teo aloha nefa manao ny asany amin'ny fomba lavorary amin'ny fampisehoana aminao ao amin'ny You Tube, indraindray tsy misy afa-tsy amin'ny feo sy sary milamina na indraindray aza miaraka amina feo sy horonan-tsary, ny fomba fihirana isan-karazany an'ny karazan-karazany miparitaka manerana ny faritry ny Espaniola.
Feo vorona 75
Farany ary imbetsaka mba hanandramana hahafantatra ny karazam-borona henontsika, dia manana rindranasa tsotra dia tsotra isika izay ahafahantsika miditra mivantana amin'ny feo na hiran Karazam-borona 75 isan-karazany.
ny sasany karazana izay sokajiana amina sokajy lehibe enina ihany izay tsy ahazoantsika manao sivana na fikarohana hafa ankoatry ny mandalo ny feon'ireo vorona samihafa izay ao anatiny.
Noho izany dia manana ireto sokajy enina lehibe ireto isika izay nampidirina ireo hiran'ny vorona tafiditra ao amin'ilay fampiharana:
Vorona tsy manidina
Ny mampiavaka ny fampiharana dia ny fampisehoana amintsika ny sarin'ilay vorona izay henontsika ny hirany, Manome antsika ihany koa ny fahafaha-mampiasa ity sary ity ho toy ny rindrina amin'ny terminal Android antsika.
Feom-borona 100: feon-tsarimihetsika
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fampiharana Android » Fampiharana tena ilaina 4 ho an'ireo tia vorona
Ny anjaran'ny tsenan'i Lenovo dia "mihena", araka ny TrendForce